Fotodrafitrasam-pifamoivoizana :: Mihisatra ny asa fanamboarana arabe eto an-drenivohitra - ewa.mg
Fotodrafitrasam-pifamoivoizana :: Mihisatra ny asa fanamboarana arabe eto an-drenivohitra
News - Fotodrafitrasam-pifamoivoizana :: Mihisatra ny asa fanamboarana arabe eto an-drenivohitra
Mandroso tsikelikely ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Ireo lalana hiarahan’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) sy ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (Matp) no hany mandeha, amin’ izao fotoana izao.
Tsy manomboka kosa ny asa amin’ireo lalana izay hiandraiketan’ny kaominina manokana: lalana Jean Ralaimongo, tonelina Ambohidahy-Ambohijatovo fiantsonana 182-Kianja tolom-piavotana, FLM 67HaMosquée 67Ha-Vatobe Andohatapenaka-Lalana Perre Rajaonah-Ny Havana-paositra 67Ha, 67Ha Avaratra-Atsinanana (Fiangonana Jesosy Mamonjy-Vassacos), Boulevard de l’Europe Namontana, Nanisana mampifandray an’Ampasampito sy Analamahitsy, AntaninandroAmbondrona, Ambodifilao sy Andraisoro ary AntohomadinikaBehoririka.
“Ny eny Antsakaviro, Ambanidia, 67Ha eo amin’ny fiantsonan’ny zotra faha-30 mankany amin’ny vatobe ary Ambodivona no asa fanamboarana manomboka, izay hiarahana amin’ny minisitera. Misy dingana arahina kosa mialoha ny hanombohan’ ireo asa an’ny kaominina”, hoy Razafimandimby Bodosoa, talen’ ny taotrano sy ny asa vaventy eo anivon’ny CUA.
Notsindriany fa misy ny fanaraha-maso amin’ny fanamboarana ireo lalana ireo mba hisian’ny antoka sy hampaharitra ny asa vita. Manana birao manokana misahana an’io lafiny io ny minisitera. Manolo-kevitra amin’ny fahatsaran’ny lalana kosa no anjaran’ny CUA.
Nilaza kosa ny avy ao amin’ ny Matp fa fanarenana ireo lalana feno lavadavaka no tena hatao aloha, izay ezahina hovitaina alohan’ny vanim-potoan’ ny fahavaratra.
L’article Fotodrafitrasam-pifamoivoizana :: Mihisatra ny asa fanamboarana arabe eto an-drenivohitra est apparu en premier sur AoRaha.
Nahazo fampitaovana avy amin’ny faritra Analamanga ireo kaominina 15 ao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo. Noho ny fangatahan’ireo kaominina ireo fa misy foto-drafitrasa tsy maintsy vonjena maika amin’izao fotoam-pahavaratra izao dia nanolo-tanana azy ireo ny faritra Analamanga. Ny 30 novambra 2018 teo ny lehiben’ny faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary no niroso tamin’ny fanolorana ny fanampiana. « Simenitra 10 taonina no natolotra androany ary manana vina hizara simenitra 10 taona isaky ny distrika eto amin’ny faritra Analamanga izahay. Mbola ho avy ihany koa famatsiana vy sy tafo”, hoy ny lehiben’ny faritra Ndranto Rakotonanahary. Nambaran’ny ben’ny tanana ny kaominina Antsahafilo, Raymond Randrianasolo fa entina hanampiana ny fitaovana hanamboarana ny tohan-drano izay efa simba tanteraka ao amin’ny kaominina io tolo-tanana avy any amin’ny faritra io. Araka ny fanazavan’i Ndranto Rakotonanahary fa fomba fanaon’ny faritra Analamanga ny manome fampitaovana ny kaominina ao anatin’ny distrika 13 mandrafitra ny faritra. Lynda A. Cet article DISTRIKA AMBOHIDRATRIMO : Nanome fampitaovana ny faritra Analamanga est apparu en premier sur déliremadagascar.
Sary: Fanou sy Tiana RL’article Songadina an-tsary a été récupéré chez Newsmada.
« Izay tsy miasa, aoka tsy hihinana »
Tsy vao izao fa efa hatramin’ny ela ny mahabe resaka eto amin’ny firenena ny momba ny karaman’ny olom-boafidy, anisan’izany ny an’ny solombavambahoaka. Miverina indray izany ankehitriny, ao anatin’izao fanombohan’ny fandraisan’ireo depiote vaovao ny asany, eny Tsimbazaza izao. Sahaza na antonony? Ambany? Midangana, mihoa-pampana? Izany ny fanontaniana sy ny fanamarihana apetraky ny vahoaka mpifidy. Ny tena be mpanamarika aloha dia ity farany. «Midangana loatra, mihoa-pampana mihitsy aza ny karama, miampy ireo tombontsoa mivaingana azo na raisin’ny solombavambahoaka, miohatra amin’ny fahantram-bahoaka sy ny fahasahiranan’ny firenena…».Etsy ankila etsy, araka ny fanambarana navoakan’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi), ny volana avrily 2019, izany hoe, fotoana vitsivitsy talohan’ny fifidianana solombavambahoaka, ny volana mey teo. Tao anatin’izany ny nahafantarana, araka ny hita ao anatin’ilay fanambarana, fa “misy tombontsoa tsy hita noanoa, misy sasantsasany takontakonana”. Ny karama raisin’ny depiote isam-bolana, ohatra, 3 tapitrisa Ar. Mitovy amin’izay ihany ny solon-tsolika raisina isam-bolana. Mitovy amin’ilay hoe “karama farany ambany” nolazain’ny fanjakana farany teo, izay mbola tsy tena mihatra ny fahana finday, roa hetsy ariary. Fa efatra alina ariary… isan’andro koa ny tambinkarama mandritra ny fotoam-pivoriana…Midangana? Sahaza? Ambany na kely loatra? Tsy ho vita ny adihevitra raha izay no hororitina. Mazava toa ny masoandro be lohataona ny zava-misy. Mbola eo an-dalam-piaingana, an-dalam-panarenana ny firenena. Mbola marefo ny toekarena e. Izany hoe, mbola ao anatin’ny fahasahiranana ny vahoaka. Na izany aza, nofidina hanompo firenena, hiasa ho an’ny vahoaka ireo olom-boafidy ireo ka mendrika hahazo ny valin-kasasarany. Fa… “Izay tsy miasa, aoka tsy hihinana izy”, hoy ny Soratra Masina, sady “Teny soa” ao amin’ny pejy faharoan’ity gazety anio ity.Mamy Randrian L’article « Izay tsy miasa, aoka tsy hihinana » a été récupéré chez Newsmada.
Votsotra afak’omaly, teo am-pelan-tanan’ny jiolahy, ilay zazavavy kely, telo taona, nisy naka an-keriny tany Marotaolana-Tsiafabositra, any Maevatanàna tamin’ny 2 jolay lasa teo. Tany Mahitsy tao amin’ny mpivady iray no hita ilay zaza. Vokatry ny fisamborana ny iray tamin’ireo jiolahy naka an-keriny nataon’ireo zandary tany Ankazobe, afak’omaly, no niafara tamin’izao fahatrarana an’ireo jiolahy izao. “Nahazo vaovao tamin’olona izahay hoe any Antokonana-Irindra, any Tsaramasoandro, ny iray tamin’ireo mpaka an-keriny saingy efa niova anarana. Rehefa nidina tany an-toerana izahay dia tratra tokoa ilay olona. Tamin’ny famotorana no nanekeny fa nisy tokoa ny fakàna an-keriny. Izy ihany koa no nanoro ny toerana misy ny zaza. Tany Mahitsy no napetrany ilay zaza, tao amin’olona mpivady iray. Samy efa voasambotra avokoa izy ireo”, araka ny fantatra. L’article Fakana an-keriny :: Avotra ilay zaza, telo taona, lasan’olon-dratsy est apparu en premier sur AoRaha.
Votsotra, afakomaly alina, i Nassir Sivjee, tale jeneralin’ny Conforama sy ny Akoor Digue. Tsy fantatra mazava ny toerana nanarian’ireo jiolahy azy fa efa tafaverina eny amin’ny fianakaviany izy io. Herinandro teo ny nitazonan’ny jiolahy azy. Mazava ho azy fa nisy ny fifanakalozana vola tany ambadika tany. Tsy nisy tratra ny jiolahy ary tsy misy fantatra ny momba azy ireo. Teny Androhibe raha handeha hamonjy fodiana ity Karana ity no nisy naka an-keriny. Andrasana izay mba fanadihadian’ny mpitandro filaminana.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Fitsirihana vesatry ny fiara vaventy: tsy vonona hanara-dalàna ireo kamiao mpitatitra
Nanao hetsika fitokonana teo amin’ny “Station de pesage” eo Ambohimalaza ireo mpamily kamiao, ny herinandro teo. Hita taratra ny tsy fahavononan’ny sasany ho amin’ny fanarahan-dalàna.Mitady hihoa-pefy ? Anisan’ny notakin’izy ireo ny fampitahana ny fandanjana natao tany Tsarakofafa Toamasina sy ny eo Ambohimalaza. Tsy azo natao anefa izany noho ny tsy fandehanan’ny jiro teo Ambohimalaza. Nangataka ihany koa izy ireo ny tsy hampidina ireo vesatra mihoatra entin’ny kamiao fa handoa onitra fotsiny ihany, araka didim-panjakana lah 27 252/2019, mametraka ireo fepetra sy sazy vaovao amin’ny fitsirihana ny vesatra eny amin’ny làlam-pirenena.Fijerena ny marimaritra iraisanaTsy misy intsony anefa ny “derogation” amin’ny tsy hanao ny fampidinana ny entana fa tsy maintsy ampidinina avokoa ireo entana amin’ny lanja mihaotra, ary aloa ny lamandy.Etsy an-daniny, efa nisy koa ny fifampidinihina sy fifampiresahana teo amin’ny tompon’andraikitry ny ministeran’ny Fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetr’andro sy ny eo anivon’ny ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP) niaraka tamin’ireo fikambanan’ny mpitatitra. Nojerena tamin’izany ny marimaritra iraisana ka nampitomboana ny vesatra ambony indrindra afaka entiny ao anatin’io didim-panjakana voalaza etsy ambony io.Tsy vonona hanara-dalànaTsy mivonona ny hanara-dalàna izy ireo raha miainga amin’ny fihetsika ataon’ireo mpitatitra ireo izao. “Tsy mijery ny fikojana sy fitandremana ny fananana iombonana sy ny tombotsoan’ny be sy ny maro mpampiasa lalana”, hoy ny eo anivon’ny MATP.Tsiahivina fa natao hikajiana ireo fotodrafitrasan’ny làlana tsy ho simba mialoha ny fe-potoana napetraka ny famerana ny vesatra ambony indrindra azo entina amin’ny lalam-pirenena.Hampitomboana ny sazy…Araka izany, nanapa-kevitra ny MATP amin’ny alàlan’ny Agence Routière (AR), sampan-draharaha misahana ireo toerana fitsirihana vesatra fa hasiana fampitomboana ny sazy aloan’ireo mpitatitra tsy manaiky hampidina ny entana miohatra.Synèse R.L’article Fitsirihana vesatry ny fiara vaventy: tsy vonona hanara-dalàna ireo kamiao mpitatitra a été récupéré chez Newsmada.
Distrikan’i Manandriana: fianakaviana 6.000 hisitraka ny Asa Avotra Mirindra
Hanatanterahana ny tetikasan’ny governemanta malagasy, Asa Avotra Mirindra ny any amin’ny distrikan’i Manandriana. Hisy, araka izany, ny fanamboarana lakandrano mirefy 1.800m hanondrahana ireo tanimbary sy tanimboly amina hektara maro iveloman’ny tantsaha any an-toerana . Mahatratra 6.000 ireo fianakaviana hisitraka ity tetikasa Asa Avotra Mirindra ity, izay avy ao amin’ny kaominina 10 ao amin’ny distrikan’i Manandriana avokoa. Haharitra 2 taona ny tetikasa hipaka eny ifotony.Vatsin’ny banky iraisam-pirenena ara-bola ny tetikasa ary iandraiketan’ny FID ny fanatanterahana sy ny fandrindrana ary ny fisitrahan’ny mponina izany.Nanara-maso ny fanombohana izany asa izany ny minisitry ny Mponina, i Michelle Bavy Angelica.Nitokana ny ivontoerana ho an’ny fikambanam-behivavy tao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana ihany koa ny tenany. Tamin’izany no nilazana ny hanaovana fanisana ireo fikambanana rehetra manerana ny fokontany sy ny kaomnina ambanivohitra rehetra ao anatin’izany distrika izany.Tatiana AL’article Distrikan’i Manandriana: fianakaviana 6.000 hisitraka ny Asa Avotra Mirindra a été récupéré chez Newsmada.
RLDC Toamasina : taratasy ho an’ny filoham-pirenena
Nampahafantatra ny fisiany sy ny asany ny Fikamba­nan’ny zon’ny mpanjifa sampana Toamasina (RLDC), ny herinandro lasa teo. Nilaza ny filoham-paritra, Rtoa Rako­ton­drahiratra Vonifanja, fa nandefa taratasy any amin’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ny RLDC, hamitana sonia ny fifanarahana eo amin’ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina CGHV. Tompon’ ny tetikasa fanitarana ny fa­mokarana herinaratra avy amin’ny tohodrano any Volo­be ity CGHV ity. Ho an’ny RLDC, ny fahavitan’izany fifanarahana izany no vahaolana maharitra hamahana ny tsy fahampian’ny herinaratra, mahatonga ny delestazy mateti-pitranga iainan’ny mpanjifa eto Toamasina. Navoitran’ny RLDC koa ny olana hafa, toy ny tsy fisian’ny taratasy fanaovana kara-panondro eto Toamasina, mahatonga ny kolikoly eny amin’ny boriborintany sasany. Voalaza fa mandoa 30 000 Ar hatramin’ny 40 000 Ar vao mahavita kara-panondro iray. Nampahafantarin’ny sekretera jeneraly (SG) ny kaominina Toamasina I ny RLDC ny fametrahana ny birao marolafy, mikarakara ireo manan-draharaha ao amin’ny kaominina, ka mihena ny fivezivezena sy ny fitetezana birao.Sajo sy Njaka A.L’article RLDC Toamasina : taratasy ho an’ny filoham-pirenena a été récupéré chez Newsmada.
KOM-Fiofanana: hiditra an-tsehatra ny fibatana fonjamby
Manao sesilany ny fanomezana fampiofanana avy amin’ny Komity olympika malagasy sy ny FMHMC (Fédération Malagasy d’Haltérophilie de Musculation et de Culturisme). Hiditra an-tsehatra, manomboka anio, amin’ny fiofanana ho mpanazatra “niveau 2”, ny eo amin’ny taranja fibatana fonjamby. Etsy amin’ny foiben’ny Malagasy Rugby Ankorondrano ny hanaovana izany, raha ny fanazavana, raha toa ka mbola tsy fantatra kosa ny isan’ireo hiofana.Ho an’ny taranja Escrime kosa, miditra amin’ny andro fahenina ny fiofanana etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano. Nohamafisin’ny mpampiofana fa tsy maintsy miatrika fanadinana ireo mpiofana ka izay afaka ihany no mahazo ny diplaoma, hozaraina amin’ny fiafaran’ny fampiofanana, amin’ny fiandohan’ny herinandro izao. Omaly, nanomboka niditra bebekokoa tamin’ny fampiharana ny mpiofana. Tsiahivina, 14 mianadahy ny hizarana traikefa ho mpanazatra “niveau 1” eo amin’ity taranja Escrime ity. Mi.Raz L’article KOM-Fiofanana: hiditra an-tsehatra ny fibatana fonjamby a été récupéré chez Newsmada.
Valo ny tranga vaovao eto Analamanga, tsy nisy ny lavo
Miisa 31 ireo tanga vaovao tamin’ny fitiliana vita miisa 257, araka ny antontanisa, navoakan’ny CCO, omaly. Avy eto Analamanga ny valo amin’izany raha 10 ny avy any Diana. Miisa dimy ireo nifindran’ny valanaretina any Vatovavy Fitovinany ary enina ny any Alaotra Mangoro. Iray avy kosa ny any Itasy sy any Matsiatra Ambony.Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Mijanona ho 226 ireo lavon’ny valanaretina eto amintsika hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Tsy niova koa fa miisa 20 ireo anaty fahasarotana. Na izany aza, miisa 45 ireo sitrana ka maro anisa amin’izany ny any Boeny, miisa 15. Tafakatra 14 788 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana amin’ireo mitondra ny tsimokaretina miisa16 167. Mbola maherin’ny 1 000, miisa 1 151, ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny toe-pahasalamany.Miisa 68 564 ireo fitiliana PCR vita raha 7 289 kosa izany ho an’ny fitiliana GenExpert.Synèse R.L’article Valo ny tranga vaovao eto Analamanga, tsy nisy ny lavo a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4504 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4504 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.